I-NMN powder - Umthengisi weFektri yoMvelisi
/ iimveliso / I-Nootropics powder / β-Nicotinamide Mononucleotide
Akukho kalo Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw ine-qualification yokubonelela ngemveliso yokuguga-i-NMN Powder ngobuninzi kunye nommiselo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu. Imveliso yethu ephakathi yenyanga inokufikelela kwi-1500kg. Wamkelekile ukuba unxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya lokuthenga:
Icandelo leepakethe: 1kg / ingxowa, 25kg / igubu
Igama lemveliso β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Inani leCAS 1094-61-7
I-Molecular Formula C11H15N2O8P
Ubukhulu beFormula 334.22
Iintetho ezifanayo I-NMN;
Ukugcina nokuPhatha 2-8 ° C kwindawo eyomileyo
♣ I-NAD + yinto ebalulekileyo yecoenzyme efunekayo ebomini nakwimisebenzi yeselula.
Amanqanaba eNAD +, ngakumbi ifom ye-NAD +, ukwehla ngokwendalo kunye nobudala kwizicubu ezininzi.
Body Umzimba wenza i-NMN njengenyathelo eliphakathi okanye "umanduleli" kwi-NAD +. Beka ngokulula: amanqanaba aphezulu eNMN athetha amanqanaba aphezulu eNAD +.
Yaziswa: Kumanqaku alandelayo, I-NMN esetyenzisiweyo endaweni ye-β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Nicotinamide Mononucleotide: Izibonelelo kunye nokuSebenzisa
Ukwaluphala yinkqubo yendalo enokuthatha impilo yakho emzimbeni, engqondweni nakwizithambiso. Iimpawu zokuqala zokwaluphala zibonakala ebusweni nasentanyeni ngohlobo lwemigca emihle kunye nemibimbi. Iziphumo zokuthambisa zokwaluphala zihlala zibaxwa zizinto ezinje ngokuvezwa kwe-UV okukhokelela kulusu olwenziweyo kunye noxinzelelo, uxinzelelo kunye nokungcola kwendalo okuvala ii-pores ezikhokelela ekucaphukeni okungapheliyo kunye namabala.
Le mibimbi kuphela kwezithambiso kunye nangaphandle okubonakalayo kokuguga kodwa ngaphakathi, zinokuchaphazela amandla akho okwenza imisebenzi yobomi bemihla ngemihla ngentshiseko efanayo namandla njengangaphambili. Ngaphaya koko, ukuguga kunokuchaphazela ubunzima bakho kunye nemetabolism, zihlala zibangela ukutyeba okungafunekiyo okunxulunyaniswa nesantya esisezantsi semetabolism.
Utshintsho olunxulunyaniswa nokwaluphala alunakuthintelwa ubukhulu becala kuba ezinye zazo ziziphumo zokuncipha kwe-mitochondrial metabolism kunye notshintsho kwimbonakalo yemfuza. Uninzi lotshintsho lomzimba olwenzeka ngokuguga ziziphumo zokuhla kwamanqanaba e-NAD, into ebalulekileyo ye-coenzyme ye-homeostasis kunye ne-metabolism efumaneka kuzo zonke izinto eziphilayo.
Ngexesha lolutsha lwethu, le coenzyme ithatha inxaxheba phantse kuzo zonke iindlela zokuvelisa amandla ezenza amandla kwaye ifumaneka kakhulu emzimbeni. Nangona kunjalo, njengoko sikhula, amanqanaba e-NAD + aqala ukwehla ngokubonakalayo.
Izixhobo zokulwa ukuguga zonyuswa ngokubanzi kwaye zisetyenziswa ngabantu kwihlabathi liphela ngethemba lokulwa nefuthe lokuguga. Nangona kunjalo, ayizizo zonke ezisebenzayo njengoko uninzi lwazo lungachaphazeli amanqanaba e-NAD + emzimbeni. Ngenxa yezifundo ezininzi. izazinzulu kunye nabaphandi bafumene isisombululo sokulwa neempawu zokuguga, isiyobisi sobomi, esibizwa ngokuba yiNicotinamide Mononucleotide ethi yakuba nje ukusetyenziswa komlomo iguqukele kwi-NAD + emzimbeni.
I-Nicotinamide Mononucleotide yi-nucleotide ethathwe kwi-niacin okanye i-vitamin B3 enokufumaneka, njengoko kunjalo, kwiziqhamo ezithile kunye nemifuno enjengeavokhado kunye ne-edamame. I-NMN kutsha nje ifumene ukubambeka njengoncedo lokulwa ukuguga, ikakhulu njengesiphumo sokupapashwa kwencwadi, i-Lifespan, ngu-David Sinclair.
I-NAD + yaziwa ngokuba luphawu lokuguga kangangexesha elithile kodwa ukulwa nefuthe lokuguga kumanqanaba ayo kunzima. Oku ikakhulu kungenxa yokuba izifundo zokuqala zijolise ekwandiseni amanqanaba e-NAD + emzimbeni usebenzisa izongezo ze-NAD +. Nangona kunjalo, kwafunyaniswa kwakamsinya ukuba i-NAD + ine-bioavailability engalunganga emzimbeni nto leyo ethetha ukuba ayifunxwa ngokulula, kwaye ukuyitya ngokugqithileyo akunampembelelo kumanqanaba ayo okuphela.
Isongezelelo seNMN sisandulela esinamandla seNAD + esibaluleke kakhulu kwinkqubo yemveliso yamandla emzimbeni womntu. Nangona kunjalo, uphando lokuqala ekusetyenzisweni kwe-NMN powder okanye isongezelelo njengesongezelelo sokuguga ukuguga senziwa kuphela ngonyaka we-2020. Izibonelelo kunye neempembelelo ze-NMN ekwaluphaleni.
Amanqanaba e-NAD + anokunyuswa ngomnye wabanduleli bayo ababini ababalulekileyo, i-NMN njengoko kuchaziwe apha ngasentla okanye i-NR. I-NMN kunye ne-NR zihamba kunye, kunye nokuguqulwa kwe-NMN kwi-NR kubaluleke kakhulu ekufunxweni kwangaphambili komzimba. I-NR imele iNicotinamide riboside enokunyusa amanqanaba endo native NAD +. Ukongezwa kwe-NR ukulwa nemiphumo yokuguga kuye kwafundwa ngokucokisekileyo kunye ne-NR supplements ibhengezwa njengezongezo 'ezikhuselekileyo nezinyamezelwayo'.
Isebenza njani i-NMN kwiQumrhu?
I-NMN idlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yemveliso yamandla kunye nokulungiswa kwe-DNA emzimbeni, nangona kungangqalanga. I-NMN ikhuthaza ukuhlanganiswa okanye ukuveliswa kwe-NAD + emzimbeni ukoyisa ukusilela kwayo, ngendlela yokuhlangula. I-NAD + inokudityaniswa ngendlela engaphezulu kweyodwa kwaye indlela yokuhlangula ixhomekeke ekusebenzeni kakuhle kwe-NMN. Umendo we-Salvage ubhekisa kwindlela evelisa i-NAD + kunye neemveliso zokuphela kwe-NAD + yokuqhekeka njenge-niacinamide okanye i-NAM. I-NAM iguqula ngokuthe ngqo kwi-NMN ethi ithi, ngokusebenzisa amanyathelo ahlukeneyo, ivelise i-NAD +. Lo ngowona msebenzi ubaluleke kakhulu we-NMN emzimbeni kwaye sesona sizathu siphambili sokwengeza ukuthandwa ngabantu.
Nje ukuba uthathe izongezo ze-NMN ngomlomo, kukholelwa ukuba ziguqulwe zaba yi-NR emzimbeni kuba ikhompawundi ye-NMN ayinakho ukudlula kwiimbumba, iye kwiiseli. Emva kokuba i-NR ingene kwiseli, emva koko iguqulelwe kwi-NMN ngefuthe le-enzyme ethile; nicotinamide ribose kinase okanye i-NRK. Le NMN emva koko ihamba kwindlela yokuhlangula ye-biosynthesis ye-NAD + ukubuyisela amanqanaba okugqibela emzimbeni womntu.
Kubalulekile ukuba uqaphele apha ukuba ukuzaliswa kwe-NAD + ngokuxhaswa kwe-NMN akubangeli nje kuphela ukwanda kwamandla kodwa ikwanazo nezinye izibonelelo zempilo ezongeza kuphela kwisibheno sokongezwa kweNMN.
Izibonelelo zezeMpilo zeNMN
Iipropathi ezichasene nokwaluphala ze-NMN azisosiphumo sokwanda kwamanqanaba e-NAD + kodwa ziziphumo zendlela ye-NMN kunye nemisebenzi emzimbeni womntu. Isibonelelo esiphambili se-NMN sisisakhono sayo sokwandisa amandla eselula kunye nawomzimba njengoko sisixhobo se-NAD + nangona kunjalo, ezinye izibonelelo akufuneki zijongwe ikakhulu ukuba ujonga ukuba ukuxhaswa kweNMN lukhetho olufanelekileyo kuwe.
Ukuba yi-NAD + booster ivumela i-NMN ukuba ivelise ezinye izibonelelo zezempilo, ezinje:
· Ulawulo lokuTyeba kakhulu
Izehlo zokutyeba kakhulu zonyuke kakhulu ukusukela kwiminyaka engama-30 eyadlulayo, kunye neepesenti zokutyeba kakhulu kubuntwana eziphantse zaphindeka ngaphezulu kwale minyaka ingama-30. Oku kuyakhathaza ngakumbi kuba ukutyeba kakhulu kukubeka emngciphekweni wezinto ezininzi ezinokubulala. Iqondo eliphantsi le-basal metabolic sesona sizathu siphambili sokutyeba okunxulumene nobudala okuhlala kubonwa kubantu abadala. Ukulawula olu hlobo lokutyeba kufuna indlela yokujongana nezinto ezininzi ezijolise kwiihormone zendlala kunye namanqanaba emetabolism. Isifundo esenziwe eQatar sifumanise ukuba ukuxhaswa kwe-NMN kwiimodeli zezilwanyana kukhokelele ekwandiseni ukubonakaliswa kohlobo lwamahomoni amabini aphambili ekunciphiseni ukutya kunye nokujonga imetabolism; leptin kunye ne-sirtuin, ngokwahlukeneyo. Olu phononongo lubonisa ukuba ukungenisa ngomlomo kwe-NMN kunokucinezela indlala ukukunceda ukuba unciphise umzimba ngelixa usonyusa isantya semetabolism, zombini ezibaxa ukulahleka kobunzima onokuba nakho.
Ngaphaya koko, abaphandi bafumanise ukuba i-NMN inyusa amanqanaba e-NAD + athi kwiiseli ezinamafutha anefuthe lokuphucula imetabolism, ukunceda ngakumbi ukunciphisa umzimba.
· Ulawulo lweSwekile
Isifo seswekile sesinye seengxaki zokutyeba kakhulu kunye nokusebenzisa izongezo ze-NMN ukulawula nokunyanga ukukhuluphala kunokuthintela isifo seswekile ekubeni sikhule. Kodwa ayisiyiyo kuphela impembelelo ye-NMN kumanqanaba eswekile yegazi. Ukuncipha kwenqanaba le-NAD + kwafunyanwa kunxulumene nokuncipha kokusebenza kweeseli ze-beta kwi-pancreas, owona mthombo uphambili we-insulin emzimbeni. Abaphandi bakholelwa ukuba le yeyona pathophysiology iphambili kuphuhliso lwesifo seswekile 2 kubantu abadala.
Uphononongo olwenziwe kwiimodeli zezilwanyana lubonise ukuba iimpuku zeswekile kunye nezindala, xa zinikwa izongezo ze-NMN, zaphucula ukusebenza kwe-beta-cell njengoko igcwalisa iivenkile ze-NAD + emzimbeni. Olunye uphononongo lujolise ekufumaneni ithagethi yonyango lwesifo seswekile seswekile 2 enxulumene nokukhuluphala ifumanise ukuba izongezo ze-NMN zinamandla okuchaphazela isibindi kunye nokonyusa i-oxidation enamafutha. Banokunciphisa ukugcinwa kwamafutha emzimbeni ngelixa bekonyusa nonyamezelo lweglucose emzimbeni.
Izongezo ze-NMN zineendlela ezininzi apho banceda ukuphucula ukunyamezelana kweswekile kunye nokunganyangeki kwe-insulin, oko ke kunceda ukulawula uhlobo lwesifo seswekile 2 kubantu abadala. Iindlela ezifanayo zisetyenziselwa ukunciphisa ngokufanelekileyo iimpawu zezinye iingxaki zemetabolism ezikhula ngexesha lokuguga.
· Umsebenzi owandisiweyo weSixokelelwano samajoni omzimba
Ngenxa yokuba ukuxhaswa nge-NMN kutshanje kuye kwaba yindlela efanelekileyo ephandwayo, ubuncinci kwiimodeli zezilwanyana, akumangalisi ukuba indima ye-NMN yafundwa ngokubhekisele kusulelo lwe-COVID-19.
Ngelixa befunda iindima ezahlukeneyo ze-coenzyme ye-multitasking, i-NAD +, abaphandi bafumanisa ukuba ikwadlala indima ebalulekileyo ekusebenzeni kakuhle kwamajoni omzimba. Ubhubhane we-COVID-19 wamva nje utyhalele abaphandi ukuba bafunde unxibelelwano oluthile phakathi kwezongezo ze-NMN, ukonyusa i-NAD +, kunye nokwenza umsebenzi wokuzikhusela komzimba ukulwa neziphumo zentsholongwane.
Olunye uphononongo olunjalo lufumanise ukuba amanqanaba e-NAD + aphelileyo kwaye emva koko, ukwanda kweminyaka, okukhokelela kwiindlela ezinzima zosulelo. Kwaye kwafunyaniswa ukuba ezi zigulana zisemngciphekweni omkhulu wokuhlaselwa sisifo kunye nokusweleka ngenxa yosulelo lwe-COVID-19. Ngenxa yezi zinto zifunyanisiweyo, kunokucingelwa ukuba ukongezwa kwe-NMN kunokuba nakho ukubunciphisa ubukhali apho i-COVID-19 ichaphazela amajoni omzimba kunye nomzimba womntu.
· Ukuphuculwa kokuchuma kwabasetyhini
Abasetyhini bayachaphazeleka liwotshi yebhayiloji ebanciphisa amandla abo okuzala kunye nobudala. Izifundo ezahlukeneyo ezenziweyo kwiimodeli zezilwanyana zabasetyhini zifumanise ukuba ukuxhaswa kwe-NMN kunokuba nakho ukunciphisa le mida kwaye kunyange ukungabikho komntwana okuhambelana nobudala kwezinye iimeko.
Uphononongo olwenziwe ngokweminyaka ubudala, iimpuku zabasetyhini zafumanisa ukuba ukupheliswa kwamanqanaba e-NAD + kunokubangela ukwehla komgangatho we-oocyte kunye nokwehla okukhulu kwamanani e-oocyte, ethi ke inciphise amandla okuzala kunye nokuzala. Ukubuyisela amanqanaba e-NAD + kwezi modeli zezilwanyana kunye nokuxhaswa kweNMN kwafunyanwa ukonyusa umgangatho we-oocyte kunye namanani ayo, kungoko kuphuculwe amandla okuzala kwakhona.
Olunye uphononongo lwenziwe kuvavanyo oluchanekileyo lokunciphisa umgangatho wee-oocyte kunye nobudala. Kolu phononongo, ii-oocyte ezivela kubantu basetyhini abadala zaqokelelwa zaza zafundwa, kubunzulu bokuqonda i-pathophysiology. Abaphandi bafumanisa ukuba ukwehla komgangatho we-oocyte kwaba sisiphumo sokutshintsha kwamanqaku kwi-DNA ye-mitochondrial ye-oocyte, ekhula ngenxa yokungalingani kwamanqanaba e-NAD +. Yiyo loo nto ukuxhaswa kwe-NMN ukunyusa amanqanaba e-NAD + kukholelwa ukuba kuphucula ukuzala kunye nempilo yokuzala, ngakumbi kubafazi abadala.
Kuba abantu ababhinqileyo abalupheleyo baphulukana nobuchule babo bokuzala ngexesha lokuyeka ukuya exesheni, izongezo ze-NMN, kunye nokukwazi ukuphucula impilo yokuzala zinokukwazi ukuguqula ukuya exesheni, ukuya kuthi ga kwinqanaba. Oku kuyakuvumela abantu basetyhini ukuba bachume ixesha elide kwaye babe nomgangatho ophezulu wee-oocyte nasemva kokuba bewele umda wobudala ngokubanzi.
· Ukunyuka kwegazi
Ngokophando olwenziwe nguGqirha DAvid Sinclair, isazi sebhayoloji esinoxanduva lodumo lwezongezo ze-NMN, njengoko sikhula, iiseli ze-endothelial ezifaka imithambo yegazi ziyancipha ngenani kunye nomgangatho. Oku ke kuchaphazela izakhamzimba ezidlula ukusuka egazini ukuya kwizicwili ezedlula kuzo izitya, yiyo loo nto kuchaphazela umgangatho uphela wenqanawa yegazi. Olu tshintsho lukholelwa ukuba lolona phawu lubangela ukwanda kweziganeko zezifo zeemithambo yegazi phakathi kwabantu abadala.
Ukongezwa kwe-NMN okanye ukuxhaswa kwe-NR kubangela ukunyuka kwamanqanaba e-NAD, athi ngokolu phononongo abangele ukuba iiseli ze-endothelial zisebenze kwaye zinamandla okuvelisa imithambo yegazi emitsha xa ezindala ziyeka ukusebenza kakuhle.
· Umsebenzi oPhuculweyo wokuqonda
Iziphazamiso ze-Neurodegenerative zizinto eziqhelekileyo ezichaphazela ingqondo, ukunciphisa ukusebenza kwengqondo kunye nomgangatho wobomi. Ukongezwa kwe-NMN ukunyusa amanqanaba e-NAD + kukholelwa ukuba kuyasebenza kakhulu ekuphuculeni ukusebenza kwengqondo kunye nokuphucula ukuhlala kweeseli zengqondo.
Kwisifundo apho iimodeli zezilwanyana ezinokulimala kwengqondo okonzakeleyo kunye ne-neurodegeneration zinikwe ikhompawundi ethile, I-P7C3-A20, kwafunyaniswa ukuba eli khompawundi liphucule umsebenzi wokuqonda kwaye layeka iinkqubo ze-neurodegenerative.
I-P7C3-A20 sisixhobo esivelisa i-NMN esivelisa i-NAD +. Ukunika iimpuku nge-TBI eli khompiyutha lafunyanwa lingenazo izibonelelo zokuqonda kuphela kodwa kwafunyanwa kukonyusa ukusebenza kunye nokuthembeka kwesithintelo segazi-nengqondo, njengoko eli candelo liyinxalenye yelungu.
· Ukuphuculwa kokuSebenza kweMisipha kunye nokunyusa ukunyamezeleka
Iimbaleki ezingathanda ukuphucula amandla abo okunyamezela kufuneka zithathe izongezo ze-NMN njengoko bekusandula ukufunyanwa ukuba ezi zongezelelo zinamandla okuphucula amandla azo e-aerobic. Esi sibonelelo songezelelo seNMN ikakhulu sisiphumo semveliso yamandla ye-NAD + kwimisipha, kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezi mbaleki zinamava okonyuka okukhulu kumanqanaba okufumana i-oksijini yemisipha.
Ngaba kufuneka ndithathe iPowder yeNMN?
I-NMN Powder inezibonelelo ezininzi eziye zafundwa nzulu, kwiimodeli zezilwanyana nakwilabhoratri. Ezinye zezi zibonelelo ziye zafundwa ebantwini, kwaye zavelisa iziphumo ezilungileyo. Ukuba uqala ukubona iimpawu zokwaluphala nokuba zikwimo yokuncipha konyamezelo, amandla emidlalo, okanye imiqondiso yezithambiso, unokufumana inzuzo ngokuthatha izongezo zeNMN. Ukusetyenziswa kwabo kucetyiswa ngokukodwa kwabo bazama ukubuyisela umva iimpawu zokwaluphala.
Imingcipheko enokubakho yeNMN
I-NMN yindawo efunyenwe ngokwendalo emzimbeni womntu, ethi emva kophando olunzulu kunye nohlalutyo kufunyaniswe ukuba akukho bungozi okanye iingxaki ezinxulumene nayo. I-NMN, xa yenziwe ngokufanelekileyo ngumnikezeli we-NMN kwaye igcinwe ngokufanelekileyo kumzi-mveliso we-NMN powder kunye nekhaya lakho, ikhuselekile ngokupheleleyo ukuba isetyenziswe ngabantu. Ukugcinwa komgubo we-NMN kubalulekile kuba ukuba igcinwe kwindawo eshushu, iya kujika ibe yi-niacinamide kwaye iqale ukutyhefa kancinci umzimba wakho xa uyisebenzisa.
Awunakhathazeka njengoko umgubo we-NMN ococekileyo wenkampani ye-NMN uhlala ugcinwe ngokufanelekileyo, kwindawo ebandayo neyomileyo. Ngapha koko, abavelisi be-NMN powder baphrinta ngqo indlela yokusetyenziswa kunye nokugcinwa kupakisho lwezongezo ukuze wazi ukuba zezona zilungileyo ukuzisebenzisa, ngaphandle kokubangela iingxaki ezinzima.
Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba ukusetyenziswa rhoqo kwezibonelelo ze-NMN kunokubangela ukunciphisa amandla okuncedisa ukuvelisa iziphumo ezifunwayo. Ngesi sizathu, kuyacetyiswa ukuba uthathe ikhefu kwizongezo xa uqala ukuqaphela ukwehla kwezibonelelo ze-NMN ezinje ngokunciphisa umgangatho wokulala kunye nokwanda kwezifo.
Ukuya kuthi ga ngoku kuthathelwa ingqalelo efanelekileyo ngexesha lokuvelisa kunye nokugcina, ekhaya nasefektri, akukho bungozi kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezinxulunyaniswa nokusetyenziswa kweNMN.
Uyithengaphi iPowder eNMN?
Ungathenga i-NMN powder kunye nezinye iindlela zokuncedisa i-NMN kwiikhemesti ezikwi-intanethi, kwiivenkile zezempilo, nakubalingane basekuhlaleni. Unokuthenga neebhegi zeNMN ezingumgubo oqulethe izixa ezikhulu zepowder yeNMN, nangona inqanaba lemizi-mveliso kwaye liqhele ukuthengwa ziinkampani ezinkulu ezizama ukwenza iipilisi kunye neephilisi zeNMN.
Unokuthenga kwakhona i-NMN powder kwiAmazon okanye kwiAmazon Prime, kodwa kufanelekile ukuba uthenge imveliso yokwenyani kubathengisi abaqinisekisiweyo njengoko uninzi lwabathengisi abangahleliyo banokukukhohlisa ekuhlawuleni isixa esikhulu sedipozithi okanye inkohliso, engenampembelelo kuyo. impilo yakho okanye inefuthe elibi kwimpilo yakho.
Ngaphambi kokuba uqale ukuthenga i powder yeNMN, kuya kufuneka ujonge izinto ezimbalwa ukuqinisekisa ukuba uthenga eyona mveliso intle.
Esona saphulelo seNMN sesona senziwe nazo zonke izikhokelo zokhuseleko kunye neenkqubo ezikhoyo. Ababoneleli beNMN kufuneka baqinisekise ukuba ukuthathelwa ingqalelo komgubo we-NMN ngazo naziphi na iityhefu okanye izinto ezingcolisayo ezinokubangela ukwenzakala okungaphezulu kokulungileyo emzimbeni womntu.
Ngapha koko, umgubo we-NMN kufuneka, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, kufuneka ugcinwe kwimeko efanelekileyo ekufuneka igcinwe nayo ngexesha lokuhambisa izongezo.
I-FAQ Malunga nePowder yeNMN
· Ngaba i-NMN powder inokuguqula ukuguga?
I-NMN powder iyapapashwa njengesongezelelo sokuguga kwaye kufanelekile, njengoko inyusa amanqanaba e-NAD + edlala indima ebalulekileyo ekunciphiseni amanqanaba akho amandla njengoko uneminyaka yobudala. Ayisiyiyo loo nto kuphela, i-NMN powder inokuguqula iziphumo zokuguga kwiinkqubo ezahlukeneyo zomzimba, kwaye ikubuyisele kwiintsuku zakho zobutsha, ezinamandla.
· Ngaba i-NMN powder ikhuselekile?
I-NMN powder iphandwe ngokucokisekileyo ukuvavanya imisebenzi eyahlukeneyo kunye nezibonelelo ezinokuthi zisetyenziswe emzimbeni womntu. Ngexesha lezi zifundo, iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho zahlalutywa kuphela kwiziphumo zokubonisa ukuba ukusetyenziswa kwe-NMN akukho ziphumo zichaphazelekayo. Nawuphi na umba onokubakho ngokusetyenziswa kwe-NMN powder sisiphumo sempazamo yomntu okanye yokubhala eyenziwe ngexesha lothutho okanye ugcino. Akukho nanye kuyo enento yokwenza nesithako sokwenyani sokuguga.
· Ixabisa malini ipowder yeNMN?
I-NMN powder ifumaneka ngokulula kwaye inexabiso elongezelelekileyo kodwa ithathwa ngokuba kufanelekile, inikwe uluhlu lwayo olukhulu lwezibonelelo eziqinisekisiweyo zesayensi. Ixabiso eliphezulu le-NMN powder alikho ngenxa yoluhlu olude lwezibonelelo kodwa kunokuba sisiphumo senkqubo yokuvelisa ebanzi kakhulu enexabiso kakhulu kubavelisi beNMN. Ngenxa yobungakanani bexabiso lesongezelelo, kuya kufuneka usoloko uqinisekisa ukuba uthenga imveliso yokwenyani kubathengisi abaqinisekisiweyo, ngakumbi ukuba uthenga iNMN kwi-Intanethi.
Izongezo ze-NMN ziya zithandwa ngakumbi ngemini, enkosi ngomsebenzi webhayoloji uDavid Sinclair othe wachitha nenxalenye ebalulekileyo yomsebenzi wakhe wokuphanda kunye nokufunda ngeziphumo zeli vithamini B3.
I-NMN ingumanduleli we-NAD + eyi-coenzyme eyimfuneko ekusebenzeni kakuhle kweendlela ezininzi ze-metabolic, immune, kunye ne-hormonal. Umsebenzi ophambili we-NAD + yeyona ndima uyidlalayo kwinkqubo yemveliso yamandla. Kuba i-NAD + ibalulekile kwimveliso yamandla, ukwehla komzimba kumanqanaba ayo njengobudala obunye kubangela ukuncitshiswa okuphawulekayo kumanqanaba amandla. Ukongezwa kwe-NMN kunokunceda ukwandisa amandla ngokwandisa amanqanaba e-NAD + emzimbeni.
I-NMN ikwanazo nezinye izibonelelo ezinje ngokuphucula ukusebenza kwe-metabolic, ukuphucula intliziyo, ukuqonda, ukujikeleza kwegazi, kunye nomsebenzi wamajoni omzimba. Le misebenzi ixhaswa bubungqina besayensi kunye nedatha, efuna ukusetyenziswa ngokubanzi kokongezwa kwe-NMN kubantu abadala ukubanceda ukuba babuyele kwiintsuku zabo zobutsha.
Ngaphandle kwezibonelelo ezininzi ze-NMN, ukuthandwa kwayo kungabekwa kwinto yokuba ayinabungozi okanye iingxaki ezinxulumene nokusetyenziswa kwayo. Ukuba uziva iminyaka yakho ikufumana kwaye ungathanda ukusela emthonjeni wolutsha, izongezo zeNMN kunokuba lolona khetho lufanelekileyo kuwe.
 Tarragó MG, Chini CC, Kanamori KS, Warner GM, Caride A, de Oliveira GC, et al.  (UCanzibe 27). "+ Yehla". Iseli Metabolism. 5 (1081): 1095-10.e10.1016. ikhonkco: 2018.03.016 / j.cmet.5935140. I-PMID 29719225.
 Stipp D (Matshi 11, 2015). "Ngaphandle kweResveratrol: Inkqubo yokulwa nokuguga yeNAD". Inethiwekhi yeNzululwazi yaseMelika.
 ICambronne XA, iKraus WL (Okthobha 2020). "+ Synthesis kunye neMisebenzi kwiiseli zeMammalian". Iindlela eziqhubekayo kwiNzululwazi yeBhayiloji. Ezama-45 (10): 858-873. ikhonkco: 10.1016 / j.tibs.2020.05.010. I-PMC 7502477. PMID 32595066.
 IBogan KL, iBrenner C (2008). "I-Nicotinic acid, i-nicotinamide, kunye ne-nicotinamide riboside: uvavanyo lweemolekyuli ze-NAD + zandulela iivithamini kwisondlo sabantu". Uphengululo lonyaka lweZondlo. 28: 115-30. ikhonkco: 10.1146 / annurev.nutr.28.061807.155443. IINKCUKACHA:
 Yue Yang, Anthony A. Sauve. I-NAD + imetabolism: I-Bioenergetics, ukutyikitya kunye nokunyanzeliswa konyango. IBiochim Biophys Acta, 2016; INGXELO: 10.1016 / j.bbapap.2016.06.014.
 Izigayo KF, Yoshida S, Stein LR, Grozio A, Kubota S, Sasaki Y, Redpath P, Migaud ME, Apte RS, Uchida K, Yoshino J, Imai SI. Ulawulo lwexesha elide lweNicotinamide Mononucleotide Lunciphisa ukwehla okuhambelana nomzimba kwiimpuku. Iseli yeMetab, ngo-2016; INGXELO: 10.1016 / j.cmet.2016.09.013.
 UNiels J. Connell, uRiekelt H. Houtkooper, uPatrick Schrauwen. I-NAD + imetabolism njengethagethi yempilo ye-metabolic: siyifumene imbumbulu yesilivere? Iswekile, 2019; INGXELO: 10.1007 / s00125-019-4831-3.
 UAnn Katrin-Hopp, uPatrick Grüter, uMichael O. Hottiger. Ummiselo weGlucose Metabolism yi-NAD + kunye ne-ADP-Ribosylation. Iiseli, 2019; INGXELO: 10.3390 / iiseli8080890.
 IShuang Zhou, iXiaoqiang Tang, iHou-Zao Chen. I-Sirtuins kunye ne-Insulin Resistance. Ngaphambili Endocrinol (Lausanne), 2018; INGXELO: 10.3389 / fendo.2018.00748.